Gobolka Skåne oo magdhow ku codsaday howlihii kontroolka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gobolka Skåne oo mag-dhow ku dalbaday howlihii baarista waraaqaha aqoonsiga. sawir: Johan Nilsson/TT
Gobolka Skåne oo magdhow ku codsaday howlihii kontroolka
La daabacay måndag 22 maj 2017 kl 15.24
Maamulka gobolka Skåne ayaa dawladda ka dalbaday mag-dhow gaarsii-san 168 milyan oo koron, midkaasina oo salka ku haya kharashkii kaga baxay kontorookii waraaqaha aqoonsiga ee lagu soo rogey xuduudaha carrigaasi.
Dhaqaale gaarsii-san 56 milyan oo gobolka kaga baxay howlahaa iyo dakhli kaga baaqday oo lagu qiyaasay 112 milyan oo koronka iswiidhishka ah.
Shuruudda mag-dhowga ayuu maamulka gobolku u gudbiyay dawladda, middaasina oo ka dambeeysay joojintii xeerka baarista waraaqaha aqoonsiga ee garoonka dayuurradaha ee Kastrup 11-kii maajo 2017, sida lagu daabacay News Øresund.
Gobolka Skåne ayaa aamin-san inaanay ahayn wax loo dul-qaadan karo in gobolku uu dusha u rito kharashka ku baxay baarista waraaqaaha aqoonsiga. Horay ayaa loo gudbiyaya shuruudda kharashka tooska ah ee gobolka kaga baxay howlahaasi, iyadoona aan dhanka dawladda wax dakhli ah laga helin kolkii shuruuddan labaad la gudbiyey.